Dagaal culus oo u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland oo ka qarxay tuulada Tukaraq - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandDagaal culus oo u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland oo ka qarxay tuulada Tukaraq
January 8, 2018 Puntland Mirror Puntland, Somalia, Somaliland 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Dagaal culus oo u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland ayaa ka qarxay tuulada Tukaraq, sida ay sheegeen dadka deegaanka iyo ilo-wareedyo ammaanka ah.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamo katirsan Somaliland ay weerar ku soo qaadeen Puntland subaxnimadii hore maanta oo Isniin ah.
June 5, 2018 Puntland oo ka digtay in lacagta kaashka ah ee Dowlada Federaalka siisay Somaliland loo adeegsado colaada Sool iyo Sanaag
May 29, 2018 Ugu yaraan labo qof oo ku dhimatay weerarka dhiigyacabnimo oo ay Somaliland kala hortagtay shacabka Laascaanood
Ugu yaraan 21 qof oo ku geeriyooday qarax ka dhacay kaniisad kutaala magaalada Tana ee dalka Masar
Qaahiro-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 21 qof ayaa lagu dilay qarax ka dhacay gudaha kaniisad kutaala magaalada Tanta ee gobolka Nile Delta, sida ay ku warameen warbaahinta maxaliga ah ee Masar. Kaniisada qaraxa lala beegsaday ayaa [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Isimada Puntland oo ayaamahaan shirar uga socdeen magaalada Garoowe ee caasimada Puntland ayaa maanta soo saaray bayaan. Bayaanka ay soo saareen isimada ayaa ku aadanaa doorashada madaxweynaha Puntland. Qodobada ayaa kala ah: 1. [...]